* Isbadalka hormoonada ee haweenka: waana sababta haweenka qaba goonjabka uu ugu kaco xilliga caadada, sidoo kale daawooyinka uurka looga hortago ee hormoonka ka samaysan haweenka qaar ayay ku kiciyaan.
* Waxyaabaha cuntada lagu daro: cunnooyinka qasacyada ku jira waxaa lagu daraa wax dhadhanka macaanka u yeelo loona yaqaano "Aspartame" iyo walaxaha lagu xifdiyo ee loo yaqaano "MSG", labadaas waxyaaboo cunnooyinkii ay ku jiraan dadka qaba xanuunkaan way ku kiciyaan.
* Cunnooyinka qaar: farmaajada raagtay, cuntada dhanaanka ah, shukulaatada iyo wixii lagu darayba.
* Cabitaannada: kaffayga iyo khamriga.
* Welwelka: niyadjabka iyo diiqada ka dhalato goobta shaqada iyo guriga waxyaabaha kiciyo xanuunkaan ayay ka mid yihiin.
* Waxyaabaha dareemaha kiciyo: sida iftiinka xooggan, qeylada dheer, carafta siyaadada ah sida barafuunada qaar, daawada rinjiga, qiiqa sigaarka IWM.
* Hurdo xumida: dhafarka iyo hurdo yarida.
* Shaqada culus, galmada, isbadalka cimillada iyo daawooyinka qaar waxay ka mid yihiin waxyaabaha kiciyo goonjabka / dhanjafka.